Umvundla - Ezanyisayo - Mzantsi Afrika
Umvundla [Lepus saxatilis]
Umvundla mkhulu pha kumacala ase mzantsi-ntshona kangange (2.7-4.5 kg) umntla wona ulingana (3.2 kg). Imiphezulu yona ichokozwe ngombala ongwevu kwaye iimhlophe apha ngaphantsi. Zinendle ezinde ezingwevu ngombala, yona nomsila wayo omnyama namhlophe zigqama kakhulu xa ibaleka.
Umvundla utya kakhulu ingca emfutshane, ingca eluhlaza kumaxesha anzima lo mvundla uzotya namagqabi, iingcambu kunye nengca eyomisiweyo.
Ukuzala kwenzeka phakathi kweyoMsintsi ukuya kweyoMdumba, kodwa zingazala naphakathi enyakeni zikhupha isizalo esinye okanye esintathu. Amawele amathathu aqhelekile ngexesha leemvula. Zizala kakhulu kwimeko ezimaxongo ezinembalela.
Zithanda ukuba zodwa. Iimazi zingakhatshwa ziinkunzi ngexesha lokuvelisa. Zithanda indawo etshitshilizayo, enengca ende kunye namathafa.
Zigcwele kakhulu eMzantsi Afrika kodwa zinqabile ehlathini, olunxwemeni nakwi ndawo ezomileyo eziphakwintshona yakwiPhondo laseMntla.
Umvundla udumile ngokubaleka phambi kwee moto ebusuku, ibaleka goso-goso. Okukubaleka kugoso kubangelwa yindela yayo yokubalekela ukubanjwa kodwa kuyasolwa ukuba izithunzi ezenziwa kukulayita kwemoto kuyothusa, iyiyo lonto ebangela ukuba itshintshe umkhomba ndlela.